Pentagon oo sheegay inay Baarayaan Howlgal ciidamadooda ku Dileen,Soomaali rayid ah - Latest News Updates
Pentagon oo sheegay inay Baarayaan Howlgal ciidamadooda ku Dileen,Soomaali rayid ah
Pentagon ayaa sheegay Jimcihii inay baarayaan warar sheegaya in weerar lagu qaaday Soomaaliya oo ay ku jireen ciidamada Mareykanka ay ku dhinteen shan qof oo rayid ah.
Agence France-Presse ayaa sheegtay in hoggaamiyeyaasha qabaa’ilka ee koonfurta Soomaaliya ay soo wariyeen dhimashada habeenkii Arbacadii oo ay ku jiraan ciidamada ajnabiga ah iyo helikabtarrada.
Milatariga Maraykanku wuxuu ku fashilmay hawlgallo ka dhan ah al-Shabaab ee lala beegsanayo kooxda argagixisada ah Al-Shabaab, waxaanay talo iyo caawimaad siineysaa ciidamada dawladda Soomaaliya.
“Waxaan ka warqabnaa warbixinnada ku saabsan eedaymaha dadka rayidka ah ee ka dhashay howlgalkan, waxaanan warbixintaan si dhab ah u qaadnay,” ayuu yiri afhayeenka AMISOM.
“Sida ku xusan eedaymaha ku saabsan waxyeellada rayidka ah ee aan helno, Amarka Afrika wuxuu dib u eegi doonaa wixii macluumaad ah ee ku saabsan dhacdada, oo ay ku jiraan wixii macluumaad ah ee khuseeya ee ay bixiyaan dhinac saddexaad.”
Taliyaha ayaa kormeeraya howlgallada millatariga ee qaaradda, oo ay ku jirto Niger halkaas oo afarta askari lagu dilay weerar gaadmo ah bishii Oktoobar, waxana uu sheegay in ay “go’aan ka gaarayaan tallaabada xigta ee ku haboon” haddii caddayntu ay taageerto khasaaraha rayidka ah.
Sanadkii la soo dhaafay, warbixinta ayaa sheegtay in howlgallada gaarka ah ee Maraykanka ay ka afduubeen 10 qof oo rayid ah oo aan hubeysan oo ay ku jiraan beeralayda iyo ugu yaraan hal ilmo oo la dilay intii lagu jiray hawlgalkii August 25 ee Bariire, Soomaaliya, oo ka baxsan caasimadda Muqdisho.
Baadhitaan AFRICOM ah oo lagu qaaday weerarka ayaa lagu ogaaday in cadawga hubaysan oo kaliya lagu dilay